Ukuhlela, ukuklama, i-UI nokufaka amakhodi
Yebo, senza izinhlelo zezinye izinkampani nabantu ngabanye futhi besilokhu sikhona kusukela ngo-1986. Sijabulela izinhlelo zokusebenza ze-Mac, iOS, Android ne-Win. Siphinde sibe nomphathi wedatha we-Filemaker. Izinhlelo zethu ze-iPhone / iPad zilandwe ngabantu abangaphezu kwezigidi ezi-3. Sineshumi leminyaka lokuhlangenwe nakho kokuthuthuka kwamaselula.
Sizinze e-US kepha sinamagatsha eYurophu nase-Asia. Sidale izinhlelo eziningi kuzingxenyekazi eziningi. Senze zonke izinhlelo zokusebenza ozibonayo kuleli sayithi nezinye eziningi ezenziwe ngaphansi kwenkontileka ezingabonakali lapha.
Ungahlola ikhasi lethu leklayenti lapha. Futhi sinekhasi le-rave lamakhasimende lapha. Singakujabulela ukusebenza nawe kuphrojekthi. Obj. C ye-iPhone / iPod Touch / iPad / Android / Mac noma i-PHP yezinhlelo zokusebenza zewebhu namasayithi. Siphinde sibe nabantu abahle bokuqanjwa kwezithombe.
Kungani ukhethe thina? Ngoba sisezingeni eliphakeme, siyashesha, sithembekile, kulula ukusebenzisana nabo futhi sibheke okuhle kwakho. Sisebenza ngehora noma ngesivumelwano sephrojekthi.
Uma unombono noma isidingo sohlelo lokusebenza lweselula noma ledeskithophu usithumelele i- imeyili. Sikulungele ukusebenza nawe.
Ngabe ufuna indlela yokukhulisa amakhono akho? Uyawathanda amaphrojekthi amasha ajabulisayo? Ufuna ukugwema umphathi, ukwesekwa kwezobuchwepheshe, ukumaketha nokuthengisa? Uma unomdlandla futhi utholakala ngokugcwele noma isikhathi esithile, hlangana nathi. Samukela, noma yikuphi emhlabeni, abahleli bohlelo, abaklami kanye nanoma yimuphi umuntu onomdlandla. Xhumana nathi.
I-iPhone, i-iPad, i-iPod Touch, i-Android nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula
Ukuthuthukiswa kwezinhlelo zokusebenza ze-Mac / Win
Ukuthuthukiswa Kokusebenza Okusheshayo (RAD)
Iklayenti le-Filemaker database nezinhlelo zokusebenza zewebhu.
Isibonisi somsebenzisi nokuklanywa kokusebenzisana
Izilawuli zangokwezifiso nezinto ze-UI
Izinhlelo zokusebenza ezihlobene nempilo nezempilo.
Izinhlelo zokusebenza zokusakaza ezenzelwe i-Radio On-Demand eziteshini zomsakazo, ubuntu bomsakazo namaqembu.
Isoftware yekhiyoski neyokuthinta
Ukuhlanganiswa kwezinsizakalo zewebhu
Ukuthuthukiswa kwezicelo zewebhu